Uma Thurman – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Burnt (2015) Unicode စားသောကျဆိုငျ ကမျြးတျောကွီး“‘ လူတှေ အပွငျမှာ ရောငျးတဲ့ ၅ ဒျေါလာတနျ ကို ဘာလို့ ငါတို့ဆိုငျမှာ ဒျေါလာ ၅၀၀ ပေးပွီး လာစားကွလဲသိလား ”’”’ လကျမလောကျလေး အသားတုံးလေး ၂ခု ပနျးကနျထဲထညျ့ထားတာကို ဘာလို့ ဈေး၅သောငျး ၆ သောငျးပေးစားနကွေတာလဲ”’ဋီး ဋခြီး သံတှေ မိုးပြံ ၊ ပနျးကနျတှေ ဇှနျးတှေ ရိုကျခှဲကောကျပေါကျသံတှေ ဆူညံနေ အပူနဲ့ အလုပျလုပျနရေတဲ့ကွားထဲ မီးပူတာတဈမြိုးနားပူ တာတဈမြိုး နဲ့ စိတျမထိနျးနိုငျရငျ မကျြခှကျဆုတျ ပကျြသတျသှားမယျ့ စားဖိုဆောငျ…………ဒီရုပျရှငျက IMDb Rating ၊ 6.6 Rotten Tomatoes 29% ၊ Metacritic score 42 ၊ CinemaScore B- တို့ရရှိထားပါတယျ။ ဝဖေနျမှု တှေ အဆိုးအကောငျးရောနှောရရှိထားတဲ့ ရုပျရှငျ တဈခုလဲဖွဈပါတယျ။ R Rating Movie အမြိုးအစား ဖွဈလို့ ၁၇ နှဈအောငျတှေ အုပျထိနျးသူတှေ နဲ့ ကွညျ့ဖို့ပွောခငျြပါတယျ။ ...
IMDB: 6.6/10 100075 votes
Kill Bill: Vol.2(2004) အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ တက္ကဆပ်ပြည်နယ် အယ်လ်ပါဆို မြို့ကလေးရဲ့ ဘုရားကျောင်းငယ်လေးတစ်ခုက လပ်ထပ်ပွဲတစ်ခုမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် သတို့သမီးတစ်ယောက်အပါအ၀င် လူကိုးဦး၊ (သတို့သမီး ဗိုက်ထဲကကလေးပါ ပါရင် ၁၀-ဦး)တို့ဟာ ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ကို သတ်ခဲ့တဲ့သူတွေက “မရဏမြွေပွေး” လို့ခေါ်တဲ့ ကြေးစားလူသတ်သမားအဖွဲ့တစ်ခုကဖြစ်ပြီး သူတို့တစ်ကယ်သတ်ချင်ခဲ့တာကတော့ သူတို့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းလည်းဖြစ်၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဘီလ် ရဲ့ ညာလက်ရုံး…ချစ်သူဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ “သူတို့သမီး”(Uma Thurman) ကိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။“သတို့သမီး”ဟာ ကံကောင်းထောက်မစွာ အသက်မသေပဲ ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်နဲ့ “ကိုမာ”(မေ့မြော)ရပြီး ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုယူနေရင်း လေးနှစ်လောက်အကြာမှ ပြန်လည်နိုးထလာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာတော့ သတို့သမီးဟာ သူနဲ့သူ့ရဲ့မမွေးလိုက်ပဲ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးအတွက် သူ့ရဲ့ မိတ်ဆွေဟောင်းတွေနဲ့ ချစ်သူဟောင်းဖြစ်တဲ့ ဘီလ်တို့ကို လက်စားချေဖို့ ကြံစည်ပါတော့တယ်။ဇာတ်လမ်အသွားကတော့ အင်မတန်ရိုးရှင်းပါတယ်။ စတင်ရိုက်ကူးစဉ်က တစ်ကားတည်းနဲ့အပြီး ထုတ်လုပ်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် ပြသချိန် ၄ နာရီကျော်ကြာမြင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Kill Bill Vol.1(2003) Vol.2 (20014) ...
Kill Bill: Vol. 1 (2003) အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ တက္ကဆပ်ပြည်နယ် အယ်လ်ပါဆို မြို့ကလေးရဲ့ ဘုရားကျောင်းငယ်လေးတစ်ခုက လပ်ထပ်ပွဲတစ်ခုမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် သတို့သမီးတစ်ယောက်အပါအ၀င် လူကိုးဦး၊ (သတို့သမီး ဗိုက်ထဲကကလေးပါ ပါရင် ၁၀-ဦး)တို့ဟာ ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ကို သတ်ခဲ့တဲ့သူတွေက “မရဏမြွေပွေး” လို့ခေါ်တဲ့ ကြေးစားလူသတ်သမားအဖွဲ့တစ်ခုကဖြစ်ပြီး သူတို့တစ်ကယ်သတ်ချင်ခဲ့တာကတော့ သူတို့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းလည်းဖြစ်၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဘီလ် ရဲ့ ညာလက်ရုံး…ချစ်သူဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ “သူတို့သမီး”(Uma Thurman) ကိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။“သတို့သမီး”ဟာ ကံကောင်းထောက်မစွာ အသက်မသေပဲ ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်နဲ့ “ကိုမာ”(မေ့မြော)ရပြီး ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုယူနေရင်း လေးနှစ်လောက်အကြာမှ ပြန်လည်နိုးထလာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာတော့ သတို့သမီးဟာ သူနဲ့သူ့ရဲ့မမွေးလိုက်ပဲ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးအတွက် သူ့ရဲ့ မိတ်ဆွေဟောင်းတွေနဲ့ ချစ်သူဟောင်းဖြစ်တဲ့ ဘီလ်တို့ကို လက်စားချေဖို့ ကြံစည်ပါတော့တယ်။ဇာတ်လမ်အသွားကတော့ အင်မတန်ရိုးရှင်းပါတယ်။ စတင်ရိုက်ကူးစဉ်က တစ်ကားတည်းနဲ့အပြီး ထုတ်လုပ်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် ပြသချိန် ၄ နာရီကျော်ကြာမြင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Kill Bill Vol.1(2003) Vol.2 (20014) ...
Batman & Robin (1997) ဒီကားလေးဟာ DC Fan တွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်... Batman & Robin ဇာတ်ကားဟာ DC Comics ဇာတ်ကောင် Batman နဲ့ Robin ကိုအခြေခံပြီး ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ 1997 ခုနှစ်ထွက် အမေရိကန်စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်.... ဒီကားဟာ Warner Bros ရဲ့စတုတ္တမြောက်နဲ့နောက်ဆုံးအရစ်ကျ ထုတ်လုပ်မှု့လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ ဒါရိုက်တာ Schumacher နဲ့ Akiva Goldsman တို့ကပူးတွဲရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်... နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ Arnold Schwarzenegger, George Clooney Chris O'Donnell, Alicia Silverstone နဲ့ Uma Thurman တို့နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်... ဒီကားမှာ မစ္စတာ ရေခဲအဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ ကျွန်တော်အသိများတဲ့ အာနိုးဟာဖြင့် သူ့မိန်းမကို ပြန်လည်ကယ်တင်ဖို့ ဘာမဆိုလုပ်ချင်နေတဲ့ ဒေါက်တာတစ်ဦးပါ... သူ့မိန်းမကိုပြန်လည်ကယ်တင်ဖို့အတွက်လုပ်ရာကနေ နောက်ပိုင်းမှာတော့ မကောင်းမှု့ဘက်ကိုဦးတည်သွားခဲ့ပါတယ်.. နောက်ထပ် ဗီလိန်တွေကတော့ မတော်မဆထိခိုက်မှု့ဖြစ်လာရာကနေ အစွမ်းရှိလာနဲ့ လှပတဲ့ အဆိပ်မယ်နဲ့ Bane တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်.... ဒီကားထဲမှာ Batman နဲ့ Robin တို့နားလည်မှု့လွဲရာကနေပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဝတ်စုံကိုပြန်လည်အားဖြည့်ဖို့ စိန်တွေကို လိုက်လံခိုးယူနေတဲ့ မစ္စတာရေခဲတို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်... နောက်ဆုံးမှာတော့ မစ္စတာရေခဲဟာ အဆိပ်မယ် ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံပြီးတော့ Batman နဲ့ Robin တို့ကို တိုက်ခိုက်မှု့များကို ...
IMDB: 3.7/10 219,416 votes